Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi iley : Aabe Meles ma dhiman (hoos ka daawo)
Cabdi iley : Aabe Meles ma dhiman (hoos ka daawo)
Posted by ONA Admin	/ September 4, 2012
Waagii uu dhacay qaraxii 9/11 ee M/weynihii dalka Mareykanka uu ku hanjabay; Ama anaga na soo raac ama waad naga soo horjeedaa (you’re either with us, or against us”) – ayuu Wasiirka AD ee dalka Qatar oo la wareystay waxaa ka mid ahaa hadaladiisii inay M/weynayaashii Carabta ee waqtigaa noolaa ceebeeyeen umadda Carbta ka dib markay u kala dheereeyeen M/weyene Bush oo midba midkii kale uu ku dacweeyey, iskana dhigay inuu yahay saaxiibka 1aadee uu aamini karo. Soomaali meel ay joogtaba waxaa qabsatay midaa mid la mid ah markuu dhintay Meles Zanawi.
Midwalba wuxuu odhan karay ayuu soo yidhi. Waxaase ugu sharaf dhac badnaa Cabdi iley oo bankii ceshan kari waayay. Isagoon awalba sharaf lahayn ayuu sharaf dhac aan taariikhda ka hadhi doonin oo filim ahaan uu isaga duubay ka tagay. Diin iyo sharaf toona ma reeban Cabdi iley. Dadbadanna wuu galaaftay. Sababtoo ah waa gaalnimo inuu qof sheegto aabe aan ahayn aabihii.
Xadiithka Rasuulka CS wuxuu ahaa sidan;
فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليس من رجل ادَّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم [نسب] فليتبوأ مقعده من النار) . رواه البخاري ( 3317 ) ومسلم ( 61 ) .
Dad badan ayaa isweydiinaya waxa ku kalifay Cabdi Iley arintaa. Inay tahay jaahilnimo ka haysata xagga diinta iyo inuu isku dhex yaacay oo wuxuu leeyahayba uusan garanaynin markuu iska duubayay cajaladaa baroordiiqda ah ee dadka reer Jigjiga iyo maleesiyadiisii hawaarinta uu ku dhaarinayo inay ku sii socon doonaan wadadii Aabe Meles Zanawi. Qofkii doonaya inuu arko heerka uu joogo iyo siduu isu bahdalay una bahdalay dadka la jooga ha daawado cajaladaa.
F.G. Waxaan isku dayi doonaa inaan idin daawadsiino qayba ka mid ah cajaladaa markay noo suurtagasho.
Kuwan ayaa u baahan in la xoreeyo ee daawada:
Dad saaxiibadii ahaan jiray oo yaqaana tasarufaadka Cabdi iley waxay yidhaahdeen; Cabdi iley arintaa waa ka dhab oo markuu noolaa Zanawi sidaa umbuu odhan jiray -Aabe Meles Zanawi-. Waxaana laga yaabaa ayay yidhaadeen inuu dareemay hadda qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee jooga Ogadenya oo sugayay fursad ay ku eryaan inay ka faa’idaysan doonaan dhimashada aabihii Meles. Arintaa darteed inuu Cabdi iley isugu dhex yaacsan yahay ayay u badan tahay oo uu doonayo in qaraabadii Meles oo siduu malaynayo xukunka qabsan doona uu ugu dhawaado, oohinta iyo dadkan daba socda ee uu ku dhaarinayo inay wadadii aabihii Meles iyo fikradihiisii ay haysan doonaan.
Sikastaba ha ahaatee, fadeexad aan la koobi karin ayay jinsigii Somali u keeneen kuwan sheeganaya inay yihiin madax Somali oo moodaya in shalay iyo berri ay siyaasadda Itobiya isku meel taagaan doonto oo karbaashkii Meles lagu dul hayn doono.
get hell ina ilay iyo kuwa sheeganaya in zenaawi yahay aabahood waanu idin ogayn in aad wada tihiin garac laakiin maanta idinka ayaa sheegtay in aad garactihiin alxamdulilaahi